Nepali Highway » Blog Archive » बैंसको बेला – अशेष मल्ल (रंगकर्मी)
Nepali HighwayThe best path through life is the highway
बैंसको बेला – अशेष मल्ल (रंगकर्मी)
Posted by Narendra Raule | Posted in literature | Posted on 11-05-2012-05-2008
खै, दिनहरु कसरी बिते पत्तै भएन । जीवनका उकाली, ओह्रालीहरु पार गर्दै यहा सम्म पुगियो । रंगकर्ममा लाग्दा जति नै दुख, कष्ट भोगेपनि विस्तारै सामान्य लाग्दैछ । किनकि यो मैले रोजेको बाटो हो । फेरी आफूले रोजेको बाटोमा हिंड्नु जस्तो आनन्द अन्त कहा हुन्छ र ?
रंगकर्मिहरुका लागी पञ्चयातकालिन समय बडो कठिन थियो । ति दिनहरु सम्भिmदा अहिले पनि जीउमा काँडा फुल्छ । सधैं पुलिसको घेरामा नाटक देखाउनुपर्ने स्थिती थियो । नाटकहरुमा सेन्सर गरिन्थ्यो । उपत्यका बाहिर नाटक देखाउन जादा स्थानिय प्रशासनलाई खबर गर्नैपर्ने नियम थियो । तत्कालिन सरकार र प्रशासनका बिरुद्ध कुनै शब्द उच्चारण गर्न मिल्दैनथ्यो । यदि कतै त्यसको गुञ्जायस भेटिएमा तत्काल गिरफ्तार गरिन्थ्यो । एकपटक त्रिभुबन विश्वविद्यालयमा झण्डै हामीलाई मार्ने प्रयास भयो । त्रिभुबन विश्विद्यालयमा हामीले ‘मुर्दाबादमा उठेका हातहरु’ नाटक देखाएको तेस्रो दिन एक्काशि बन्द गराईयो । मण्डलेहरुले हामीलाई बेस्सरी कुटे । बोल्नै नपाउने, वाक स्वतन्त्रतामाथी अंकुश लगाइएको क्षण थियो त्यो । तैपनि आफ्नो कर्म छोडिएन ।
न्ााटकसँग मेरो गहिरो प्रेम त स्कुल पढ्दै खेरी बस्यो । धनकुटाको गोकुन्डेश्वर हाइस्कुल पढ्दा पहिलो पटक विजय मल्लको ‘भोली के हुन्छ ?’ भन्ने नाटक खेलेको सम्झना छ । त्यसबेला धनकुटाका टोलटोलमा कवि गोष्ठी, नाटक र संगितका कार्यक्रम भईरहन्थे । अग्रजहरुले मलाई नाँच्न, मादल बजाउन र अभिनय गर्न लैजानुहुन्थ्यो । नाटक संगै लेखनमा बिस्तारै मेरो अभिरुचि बढ्दै गयो । अहिले म जे छु, जस्तो छु त्यही बेलाको जगमा बनेको हुँ । स्नातक तहमा अध्ययन गर्दा ’नव कलाकार सांस्कृतिक समुदाय’ खोलेर नियमित नाटक गर्न थाल्यौं । र धनकुटामा पहिलो पटक टिकट काटेर नाटक हेर्ने परम्पराको सुरुवात गर्ने पनि हामी नै हो । २५ पैसा, १ रुपैंया भन्दा बढी तिर्नुपर्दैनथ्यो । पहिलो पटक मैले लेखेको नाटक ‘तुवालोले ढाकेको बस्ति’ ०३२ सालमा प्रदर्शन गरियो । २ दिनको बाटो हिंड्दै बिराटनगर आएर पनि देखायौं । बिस्तारै विरगञ्ज हुदै काठमाडौं पनि लम्कियौं । एकेडिमीमा एक महिना सम्म यो नाटक चल्यो । यसपछि म सँग आएका साथीहरु गाउ फर्के । मैले भने यतै बसेर आफ्नो अध्ययन अघि बढाउने निधो गरें ।
यहिबाट मेरो जीवनले नया मोड लियो । अध्ययनसँगै लेखन, रंगकर्मले तिब्रता पायो । रेडियो नेपाल र गोरखापत्रलाई म कहिल्यै भुल्दिन । रेडियोमा मेरो नाटक र कविता बज्दा एकपटकमा यस्तै २५ रुपैया पाउथे । त्यस्तै गोरखापत्रमा कविता छापिदा पनि २०, २५ रुपैंया पारिश्रमिक मिल्थ्यो । यो पैसाले काठमाडौंमा एक हप्ता खानलाई पुग्थ्यो । विद्यार्थी जीवनमा यसैगरी संघर्ष गरियो । त्यसबेला नाटक नै मनोरञ्जनको साधन थियो । यो निकै लोकपि्रय पनि बनिसकेको थियो । टेलिभिजनको जमाना आईसकेको थिएन । ०३८ मा सर्वनाम नाट्य समुहको स्थापना भयो । यसको स्थापना पछि पहिलो पटक ‘इत्यादि प्रश्नहरु’ न्ााटक देखाइयो । म रंगकर्ममा यसरी लागें । विहे नगर्ने विचार गरें । बिहे गरेपछि मेरो रंगयात्रामा बाधा पुग्छ जस्तो लाग्यो । स्वयं केटीहरु मलाई प्रेम प्रस्ताब राख्थे । कतिले सिधै विहेको प्रस्ताब पनि राखे । एकपटक नाटक खेलिरहेकै बेला एक युवतिले २०, २५ पेजको चिठी दिईन् । पछि हेरें, त्यो प्रेम पत्र रहेछ । झस्किएँ । दुइ दिनपछि त्यो चिठी च्यातें । पत्र दिनेलाई सम्झाउदै भनें, ‘म तिमीलाई बहिनी बनाउछु ।’ सभागृहमा पनि एक युवतिले विहेको प्रस्ताब राख्दा मैले अस्विकार गरें । मलाई लाग्यो, म ठूलो साहित्यकार, नाटककार बन्छु । यद्यपि मैले भने जस्तो मान्छे पाएपछि साबित्रालाई जीवनसाथीका रुपमा स्वीकारें ।
मन भनेको बौलाहा घोडा जस्तै हो । लगाम लगाउन सकिएन भने यसले क्षतबिक्षत पारिदिन्छ । चेतनाले मनलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ । जीवनमा केही गर्न चाहनेले यस्ता सानासाना कुरा त्याग्नुपर्छ । क्षणिक यौन बासनामा लिप्त हुने हो भने जीवनमा केही गर्न सकिदैन । भगवानले हरेक घडी परिक्षा लिइरहन्छ । हामीले त्यो परिक्षा पास गर्नुपर्छ । यतिबेला सिर्जना र नाटक कर्ममै ब्यस्त छु । पद्यमकन्या क्याम्पसमा नेपाली साहित्य र रंगमञ्च विषय अध्यापन गराउछु । जहा छु, जस्तो छु एकदम सन्तुष्ट छु । आखिर मैले रोजेको बाटोमा छु । यो बाटोमा लम्किन पाउदा साह्रै आनन्द मिलिरहेको छ ।
Share This:TweetFacebookStumbleUponDiggDelicious	Read More
नरेन्द्र रौले	Dear Readers,
Warmly welcome to you in my blog.This is Narendra Raule,akathmandu based journalist for5years. I wrote different news paper and magazine before.
Currently, i amareporter with 'Kantipur Saptahik' which is highly circulated paper and published by largest media house Kantipur Publications. I am interested to write in information and technology, environment, life-style,energy and features.
'Nepali Highway' is my personal diary.Where I can express my feelings, expressions, travelogues, journalistic writings and so on. In other words,
it isareflection of my life. My hobbies are traveling, journalism, reading books, music, and literature.If you want to ask something , can contact below :
Email : info@nraule.com.np naren.raule@gmail.com
Mobile number : ( +977 ) 9841-605756 (+977) 9851005756
online users	Categories
Recent CommentsNora on ‘सन्तुष्टि मिल्ने काममा डुबिरहन मन लाग्छ’- अरुणसिंह बस्नेत (अध्यक्ष – हेल्प नेपाल नेटवर्क)offshore corporation on समाज र साहित्यbinee on लाहुरे बन्न मन लागेन (डिबि गुरुङ / ब्युटि थेरापिस्ट)Larhonda Dobine on Nepalese mark day of “people’s triumph”People Like Us Movie Online Free Stream on ‘सन्तुष्टि मिल्ने काममा डुबिरहन मन लाग्छ’- अरुणसिंह बस्नेत (अध्यक्ष – हेल्प नेपाल नेटवर्क)Tags
Twitter Sphere	Nepali online portal Viewers Eye	RadarURL
Blog Hit	© All Rights Reserved. Nepali Highway |